Ubonga igalelo likaDe Villiers ozakhela udumo kwi-IPL
U-DEWALD Brevis umdlali wekhilikithi wakuleli osemncane oza kahle njengoba eyibambe kwi-Indian Premier League Isithombe: BACKPAGEPIX
UMDLALI wekhilikithi wakuleli osemncane, uDewald Brevis, uthi ulwazi aluthole kwinkakha yamaProteas, u-AB de Villiers, lumsizile ukuthi alungele ukudlala emazingeni aphezulu.
UBrevis (18) waqala ukuba sematheni ngesikhathi edlala kwi-ICC Under-19 Cricket World Cup ekuqaleni kwalo nyaka. Washaya ama-run angu-506 kulo mqhudelwano, ephula irekhodi elalibekwe nguShikhar Dhawan wase-India ngo-2004.
Lokho kuholele ekutheni athole ithuba lokudlala emqhudelwaneni we-Indian Premier League (IPL) okokuqala ngemuva kokuthengwa yiMumbai Indians.
Ngenxa yendlela adlala ngayo, uBrevis usefaniswe noDe Villiers waze wanikezwa isiteketiso esithi “Baby AB”. Uthole ithuba lokuncela ulwazi eqhaweni lakhe kwazise bobabili baqhamuka esikoleni esisodwa ePitoli, i-Afrikaanse Hoër Seunskool, eyaziwa nge-Affies.
“U-AB ubambe iqhaza elikhulu. Sinobudlelwano obukhethekile naye. Ungifundisa izinto ezincane ezingisiza kakhulu. Uyangeluleka ngesimo somqondo esidingekayo kulo mdlalo nokuthi ngigxile ekwenzeni izinto ezilula," kusho uBrevis.
“Ungifundisa ngokucabanga ngomdlalo aphinde angisize nangezinto ezincane okumele ngithuthuke kuzona."
Akuyihambeli kahle iMumbai Indians kwi-IPL okwamanje njengoba ithelwe ngesibhaxu emidlalweni eyisithupha esayidlalile.
UBrevis usadlale emine, wathola ama-run angu-29 emabholeni angu-19 bedlala neKolkata Knight Riders nayisishiyagalombili emabholeni angu-11 bebhekene neRoyal Challengers Bangalore.
Emidlalweni yakhe emibili yakamuva ukhombisile ukuthi useyajwayela ukudlala kuleli zinga njengoba ethole ama-run angu-49 emabholeni angu-25 bebhekene namaPunjab Kings nangu-31 emabholeni angu-13 bedlala neLucknow Super Giants.
Usanda kuvuma engxoxweni abe nayo ezinkundleni zokuxhumana zeqembu lakhe ukuthi ngaphandle kukaDe Villiers, usenazo izithombe zabadlali abafana noVirat Kohli noSachin Tendulkar odongeni olusekamelweni lakhe.
Yize uKohli edlalela izimbangi, iRoyal Challengers Bangalore, uBrevis unethuba lokufunda kumqeqeshi we-Indians, uMahela Jayawardene, umeluleki weqembu uTendulkar, nabanye abadlali abamnkantshubomvu uRohit Sharma, noKieron Pollard.
"Bekuyiphupho lami ukusebenzisana nezinkakha ezifana nalezi. Kuningi engingakufunda kubona futhi ngihlose ukusebenzisa sonke isikhathi nginabo ukuze ngifunde okuthile," usho kanje.
"Ngiyakujabulela ukudlala lapha futhi ngizama ukufunda kuwo wonke umuntu ukuze ngidlale ngaphandle kovalo. Ngiyalazi ikhono lami ngakho-ke uma ngibona ibhola ngiyakwazi okumele ngikwenze.
"Ukushaya ibhola ngamandla kubalulekile, futhi kubalulekile nokwehlisa umoya ezimweni ezithile. Sizobona ukuthi imidlalo elandelayo izohamba kanjani."
I-Indians izodlala umdlalo olandelayo neChennai Super Kings namuhla ntambama ngo-4 lapho izobe ibheke ukunqoba ukuze ibuyise ithemba lokuthi ingadlulela esigabeni somkhumulajezi.